Alụm di na nwanyị bụ otu n’ime ihe ndị na-ekewa ndị Amerịka. Ụfọdụ, tụmadị ndị ụka, na-ekwu na nwoke na nwoke ịlụrita onwe ha bụ ịmerụ ala. N’okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ụnyahụ bụ Nwenezdee, onye isi ala mba Amerịka, bụ Barack Obama, kwuru na ya kwenyere ka nwoke na-alụ nwoke ibe ya, ma ọ bụ ka nwanyị na-alụ nwanyị ibe ya.
Nke a mere ka o mechara mkpụrụ abalị abụọ osote ya, bụ Joe Biden, gwara ndị nta akụkọ na ya na onwe ya kwenyere n’otu ihe ahụ.
Alụm di na nwanyị bụ otu n’ime ihe ndị na-ekewa ndị Amerịka. Ụfọdụ, tụmadị ndị ụka, na-ekwu na nwoke na nwoke ịlụrita onwe ha bụ ịmerụ ala.
Gọvanọ Mitt Romney, onye ji aha ndị otu Rịpọblikan azọ ọkwa onye isi ala, sị n’alụm di na nwanyị kwesịrị ịdị nanị n’etiti nwoke na nwanyị.